Ikhansili yeHarare Idilizela abantu Izindlu eGlen Norah C
Umanisipala weHarare usungule uhlelo lokubhidliza izakhiwo azithi zakhelwe lapho okungavunyelwa khona ngumthetho, eqala ngemzini weGlen Norah C, emva kwesikolo se Kundai Council Primary okungcelane lomuzi we Glenview 8.
Abathenga ama stands kulindawo, bathi umanisipala umane wabafikela nje waqala ukubhidliza lezi zindlu ebesezakhiwe zisezibangeni ezehlukeneyo.
Isikhulumeli sikamanisipala umnumzana Michael Chideme utshele intathelizindaba ukuba okwenziwe eGlen Norah yinto abekade behlezi beyixwayisa uzulu ukuba angaze akha lapho okungavunyelwa khona. Wathi umanisipala uhlala exwayisa uzulu ukuba angaze aphonguthenga izithanda ebantwini abangaziwayo, njalo adingisisa kuqala ulwazi phezu kwalabo abawathengisayo, kwazakale ukuba basemthethweni loba hatshi.
Wengeza uChideme ukuba umanisipala usungule loluhlelo ukulungisisa lokho obesekusenziwa ngabanye, ukuyakwakha yiloba ngaphi, inengi yalezondawo zingekho emthethweni.
Umnumzana Themba Nkala waseGlen Norah ngomunye walabo ababone lokhu kusenzakala.
Wathi uNkala bekumele umanisipala aqale atholise laba bantu indawo lapho abangakha khona anduba ababhidlizele abakade sebezakkha ethi kodwa akavumelani labantu abenza okungekho emthethweni.
Abanengi abakhulumisane leStudio Seven batshengise ukukhathazeka ngoba bethi bemotshe imali enengi ukuthenga izithanda lezi kanye lempahla yokwakha izindlu esezibhidliziwe.
Laba bantu bathi la kungamastanda abethengiswa ngumnumzana Tafadzwa Machemedze wase Glenview area 8.
UMachemedze ubikwa enguye obengumphathi sikhwama njalo umuntu bekumele aqalae ahlawule amakhulu ayisithupha amadola-$600-00 ye deposit. I Studio Seven ayisanelisanga ukukhulumisana laye uMachemedze ngesikhathi loludaba lulotshwa.
Ngemva kwalokho umuntu ubetholiswa indawo eyisilinganiso samasquare metres angamakhulu amabili-200sq metres njalo istanda ngasinye besibiza inkulungwane ezimbili zamadola- $2,000.
Zilitshumi lanye- 11, izindlu ezibhidlizwe kulindawo njalo umanisipala uthi akayi kubuyela muva ngoba efuna ukulungisisa isimo sedolobho leHarare.